You searched for टुटल - Tech News Nepal Tech News Nepal
टुटल, पठाओजस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ‘सजिलो सवारी’
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा राइड शेयरिङ सेवा लगभग परिचित बनिसकेको छ । विशेषगरी युवापुस्ता र प्रविधिप्रेमीले यस्ता सेवामा चासो देखाएका छन् । आफ्नो समयमा सहज रुपमा गन्तव्यमा पुग्न सकिने भएकाले
Published On : 28 July, 2021
टुटल एपमा डार्क मोड
काठमाडौं । नेपाली राइड शेयरिङ प्लेटफर्म टुटलले आफ्नो एपमा डार्क मोड फिचर थपेको छ । अब प्रयोगकर्ताले लाइट वा डार्कमध्ये आफूलाई मन परेको मोडमा एप चलाउन पाउनेछन् । कम्पनीले हालका
Published On : 17 July, 2021
पठाओ र टुटलमा राइडर पाउनै मुश्किल
काठमाडौं । सरकारले निजी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेसँगै पठाओ र टुटलले राइड शेयरिङ पनि सुरु गरेको हो । निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलिसकेको नभए पनि सरकारले केही खुकुलो भने बनाउँदै
आजदेखि टुटल र पठाओको सेवा सुचारु
काठमाडौं । आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा राइड शेयरिङ प्लेटफर्म टुटल-पठाओको सेवा सुचारू भएको छ । जारी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आइतबारको बैठकले आजदेखि राइड शेयरिङ सेवा
मंगलबारदेखि टुटल-पठाओ समेत सञ्चालनमा आउने, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । जारी निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएसँगै राइड शेयरिङ प्लेटफर्म टुटल-पठाओ समेत सञ्चालनमा आउने भएका छन् । ८ गते मंगलबारदेखि निजी निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु भएसँगै त्यही
Published On : 20 June, 2021
पठाओमा समस्या आएपछि टुटललाई अर्डर धान्न मुस्किल
काठमाडौं । बुधबारदेखि राइड शेयरिङ पठाओमा समस्या देखिएपछि प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप कम्पनी टुटलमा अनपेक्षित रुपमा चाप बढेको छ । नियमितभन्दा दोब्बर ट्राफिक बढेपछि कम्पनीको सिस्टम नै स्लो हुन पुगेको हो ।
Published On : 24 March, 2021
टुटल र पठाओ चालकले कहिलेसम्म कुटाइ खाने ?
काठमाडौं । हिजो सोमबार काठमाडाैंस्थित नयाँ बसपार्कमा अन्य ट्याक्सी ड्राइभरले पठाओसँग आवद्ध ट्याक्सी ड्राइभरमाथि हातपात गरे । पठाओका ट्याक्सी ड्राइभरले अर्को ट्याक्सीको ग्राहक खोस्यो भन्दै विवाद निम्तिएकाे थियाे । लाइनमा
Published On : 23 March, 2021
काठमाडौं । टुटलले आफ्ना राइडरहरुबाट कमिसन लिन छोडेको करिब एक वर्ष भएको छ । नेपालकै पहिलो राइड शेयरिङ सर्भिस टुटलले आफ्ना बाइक राइडरहरुको आम्दानी बढाउने योजनाका साथ छ महिनाका लागि
पुल्चोक इन्जिनियरिङमा प्रविधि प्रदर्शनी हेर्न जानेलाई टुटलको सेवा निशुल्क
काठमाडौं । पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानमा शुक्रबारदेखि देखि सुरु भएको लोकस २०२० प्रदर्शनी अवलोकन गर्न जानेहरुका लागि टुटलले निशुल्क राइड सुविधा दिदैँछ । लोकसको इभेन्टमा मोबिलिटी पार्टनरको रुपमा रहेको टुटलले लोकस
Published On : 31 January, 2020
पठाओ र टुटल जस्तै ‘हूप’को इन्ट्री, के छ फरक ?
राईड सेयरिङ सेवा पठाओ र टुटल जस्तै अब ‘हूपराईड’ नेपाली यात्रुको नयाँ विकल्पको रुपमा देखा परेको छ । टुटल र पठाओले कानूनी चुनौतिको सामना गरिरहेका बेला बजारमा त्यस्तै किसिमको सेवा
Published On : 26 December, 2019
टुटल-पठाओको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश
पाटन उच्च अदालतले राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका टुटल–पठाओको पक्षमा आदेश दिएको छ । ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतको सोमबारको इजलासले टुटल–पठाओमाथि प्रतिबन्ध लगाउने
समावेशी पहुँचले मात्र डिजिटल अर्थतन्त्रमा दिगो विकास सम्भव छ
कोभिड १९ र लकडाउनले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विलासिताको विषय नभएर आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । यो नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वका लागि नै एउटा उदाहरण हो